Elise LeGrow: "You Can Never Tell" (ဘယ်တော့မှ မင်းမသိနိုင်ဘူး) / "Over the Mountain, Across the Sea" (တောင်ကိုကျော်၊ ပင်လယ်ကိုဖြတ်) - English-Video.net
Elise LeGrow - Singer
Elise LeGrow | Speaker | TED.com
Elise LeGrow: "You Can Never Tell" (ဘယ်တော့မှ မင်းမသိနိုင်ဘူး) / "Over the Mountain, Across the Sea" (တောင်ကိုကျော်၊ ပင်လယ်ကိုဖြတ်)
အဆိုတော်နဲ့ သီချင်းရေးသူ Elise LeGrow ကနေပြီး ခေတ်ဦးပိုင်း ဆိုးလ်နဲ့ ရော့ခ်ဂီတတီထွင်သူများကို ၎င်းတို့ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့သီချင်းတွေရဲ့ ရင်းနှီးပြီး သဘာဝအတိုင်း သီဆိုတီးမှုတ်ထားတဲ့ သရုပ်ဖော်ဆိုချက်တွေနဲ့ ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ သူမနဲ့ သူမရဲ့တီးဝိုင်းဟာ ဒီဆိုးလ်ဂီတဆန်တဲ့ တင်ဆက်ပုံတွေကို ဖျော်ဖြေနေစဉ် နားဆင်လိုက်ပါဦး။ Chuck Berry ရဲ့ "You Can Never Tell" (ဘယ်တော့မှ မင်းမသိနိုင်ဘူး) နဲ့ Johnnie and Joe ရဲ့ ဦးဆုံး ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ "Over the Mountain, Across the Sea" (တောင်ကိုကျော်၊ ပင်လယ်ကိုဖြတ်) တို့ပါ။
Powerhouse singer Elise LeGrow plays with the classic sounds of R&B. Full bio
(Singing) It wasateenage wedding
and the old folks wished them well.
(သီချင်း) ဆယ်ကျော်သက် မင်္ဂလာဆောင်ပါ
လူကြီးတွေက သူတို့ကို ဆုမွန်ကောင်းတွေပေးတယ်
Pierre ဟာ မိန်းမပျိုကို တကယ်မချစ်ဘူးဆိုတာ
အခုတော့ လူရွယ်မောင်နှံဟာ ဝတ်ပြုဆောင်
have rung the chapel bell.
C'est la vie, say the old folks,
ဒါဟာ ဘဝပဲ လို့ လူကြီးသူမတွေက ဆိုတယ်
withatwo-room Roebuck sale.
နှစ်ခန်းပါတဲ့ Roebuck ရောင်းပွဲက
တိုက်ခန်းတစ်ခုကို ပရိဘောဂ ခင်းကျင်းကြတယ်
ရေခဲသေတ္တာ မှာ အအေးခံညစာတွေ ချင်း
ဒါပေမဲ့ Pierre အလုပ်ရှာတွေ့တော့
the little money comin' worked out well .
wasacherry red '53.
ဝယ်ခဲ့တယ် ချယ်ရီနီ ၅၃ ပေါ့။
New Orleans ကို မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်
it was there where Pierre
Pierre က ချစ်စရာမိန်းပပျိုလေးကို
was wedded to the lovely mademoiselle.
I recently had the tremendous opportunity
of searching for gold
မကြာသေးခင်က Chess Record ထွက်
ရှိထားတဲ့ ဧရာမ သီချင်းမိုင်းတွင်းထဲမှာ
in the vast mine of songs
released by Chess Records,
a Chicago-based label that was really
very active in the '50s and '60s in the US
ရှိကာဂိုအခြစိုက်တဲ့ တံဆိပ်ဟာ အမေရိကက
၅၀၊၆၀ လွန်တွေမှာတကယ်တက်ကြွခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ပါ။
and that music spread all over the world.
ဒီဂီတက တစ်ကမ္ဘာလုံး ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တယ်။
And the songs that I'm singing tonight
ဒီည ကျွန်မဆိုနေတဲ့ သီချင်းတွေက
are from an album that I just put out
called, "Playing Chess,"
"Playing Chess" လို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်မထွက်
that pays homage to those songs.
ဒါက ဒီသီချင်းတွေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ပါ။
And these guys were really the innovators
of rock 'n' roll and soul and R&B
ဒီလူကြီးတွေဟာ ကျွန်မတို့ အခု သိကြတဲ့
ရော့ခ်အင်ရိုး၊ ဆိုးလ်နဲ့ R&B တွေရဲ့
(Singing) Over the mountain,
(သီချင်း) တောင်ကို ကျော်
there'sagirl waiting,
she's waiting for ...
beyond every cloud,
she's passed the wind blowin' loud.
a girl waits for me.
Tell the sands,
please tell the wind to let my love pass.
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့အချစ်ကို ကမ်းခွင့်ပ​ြု
ဖို့ လေကို ပြောပေးပါ။
Tell the moon up --
Tell all the birds that fly on by
that over and over the mountain ...
ပျံသန်းတဲ့ ငှက်အားလုံးကို ပြောလိုက်ပါ
my love waits for me.
into each dark, starry night,
အိုး တင်းကျပ်စွာ ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့
that's sealed so tight.
that over and over the mountain
Into each dark and starry night,
သူမ ငါ့ကို စောင့်နေတယ်
Oh, she waits for me.
အို; သူမ ငါ့ကို စောင့်နေတယ်
ငါသိတယ်၊ ငါသိတယ်၊ ငါသိတယ်၊ ငါသိတယ်
အိုး ဝို ဝိုး ဝိုး
Elise LeGrow: "You Can Never Tell" (ဘယ်တော့မှ မင်းမသိနိုင်ဘူး) / "Over the Mountain, Across the Sea" (တောင်ကိုကျော်၊ ပင်လယ်ကိုဖြတ်) | TED Talk | TED.com